Kuvaka Kicker Ramper Ramp
Usati Watanga Kuvaka Kicker Yakazara
Hongu, chikepe chinomuka chichiita basa guru pakubata iwe mumhepo. Asi dzimwe nguva unoda kusanganisa tsika. Chikwereti chinoputika ndicho chinhu chakanaka chekuwedzera zvishoma pane zuva rako pamvura uye zvingokupa mhepo yakawanda yaunoda kuti uende ... chero chii chauri kushanda.
Tisati tavamba kunyange, pane zvinhu zvishoma kuti uchengete mupfungwa.
• Bvisa chibvumirano usati wavaka. Mvura zhinji nemvura dzichava nemitemo panzvimbo yekutsvaga kuruka kwechikepe kana kukanganisa. Ikoko kunogona kuva nemashoko pamusoro pekukura, nzvimbo yekuchengetwa, kuchengetedzwa kwekuchengeteka, kana kunyange kana vachizokubvumira kuti uve neimwe pane gungwa zvachose. Tsvaga ruzivo urwu kutanga, nokuti zvingave zvinonyadzisa kushandisa mari yekuvaka kukanganisa chete kuti uwane kuti haugoni kuishandisa.
• Edza iyo nzira yakarurama. Izvi zvakagadzirirwa kuti zvive nyore kugadzirisa kuita chikwata chikuru kana chiduku nekatsinye kana kuti shingaira. Iwe unoziva mano ako uye zvaunokwanisa kuita, saka iva nechokwadi chokuti unosarudza hukuru hunofanana nehutano hwako.
Saka kana hurumende dzako dzomunharaunda dzakanaka dzichiri nani, neniwo. Ngatitangei kutanga.
Zvishandiso nezvimwe Zvinhu
Usati watanga kuvaka, iyo pfungwa yakawanda yekuverenga mari uye kuunganidza matanho anodiwa nezvinhu. Hapana chimwe chinhu chaicho kunze kwechinhu chakanaka ichi chinovaka. Hezvino izvo zvaunoda:
Hammer kana Nail Gun
Drill na Phillips Head Bit
30 - 35 ct. Kushushikana Kwakaitwa 2x4 (8 - 12 ft kureba)
8 - 10 Sheets ye 1/2 "Plywood kana Ecosheet
Mapuranga epurasitiki kana Dock Floats (Zvimwe Zvinodhura asi zviri nyore kushanda nazvo)
Yakagadzirirwa Stud Sinkers (Misumeri)
Fomu yacho yakananga mberi. Iwe uri kunyanya kuenda kundovaka zvikwangwani zviviri uye zvitatu zvitatu. Chokutanga tsvaga kureba kwaunoda kuita yako rampu. Nokuti iyi rampu ini ndichange ndichishanda nemamita matanhatu ekukwirira hupamhi hwepamita 8, uye urefu hwemakumbo gumi nemaviri. Izvo zviyero zvinotendera kuti zvishoma zvishoma zvive nekucheka uye nyore nyore kuvaka.
Chokutanga, tanga nechepamberi pegomba. Cheka zviviri zve 2x4 kusvika pasi petsoka 6, uye ipapo zviisunge pamwe chete nedzimwe zvidzidzo zvitatu kuti uumbe 6 x 8 rectangle. Pasi rechetende rinofanira kuva nematanda maviri akabatanidzwa pamwechete kuti aite 4x4 span. Ichi chikamu chinozopedzisira chabatanidzwa kusvika kune pasi pepamhara.
Zvadaro tora mabhiri maviri e 2x4 uye uisungirire pamwe chete ne 2 mamwe 8 tsoka 2x4 kuti uite 8 x 12 rectangle. Iyi ndiyo pasi yepamhara. Famba pasi pembera kuti usangane nechemberi rekande pasi.
Zvimwe kuva neshamwari inobatsira iwe kubata mberi kwekomba romuti wakarurama kana kuisimudzira pamusoro pekunze kwemasvingo. Zvadaro shandisa 6 yemakumbo ako akavhara, akaparadzaniswa zvakafanana, kuti ubatane nechomukati chemutiro mberi.
Ikozvino ndiko kunotanga mathematiro anotamba. Yenguva yekuita magwendefa. Kuchengetedza iyi rampu yakanaka kwazvo, isu tichatanga tambo dzokutanga dzomukati pamakumbo mana. Ne tepi yako, chiyera 48 masendimita makumi maviri kumusoro kwemutiro uye uite chiratidzo pamativi ose emativi akadzika. Zvadaro tora rutsoka rwechipiri rwechipiri uye urisungirire pakona yepurasitiki pasi, wozosimudza kuti ufanane nechepamusoro-soro yepfundo kusvika kumakumbo mana mawakangoita.
Isa musungiri kuti musungirire panzvimbo, uye itai zvakafanana kune rumwe rutivi. Pamwe mativi maviri etsoka 2x4 ari munzvimbo inoenda kumakona nekusungirirwa chidziro kumakona epasi pasi. Izvi zvichachengetedza makumbo ako munzvimbo. Iwe unofanirwa kunge uine netsoka kana kuti ye 2x4 yakawanda ichibuda kubva mberi. Siya izvi zvakanyanya zvekuti zvino kana iwe uchida kugadzirisa.
4 Nzira Dzokuderedza Makomo neMakomo
Zvipo Zvipo kune Vechidiki Vechidiki veMakore Ese
Nzira Yokusunga uye Kushandisa Autoblock Knot
Kudzivirirwa Lineman Ndiyo Nzira Yokutanga Kudzivirira
Nzira Yokubatanidza PBA Tour
Pool Ball Drills - Killer Safeties Kukunda Bhiriyadhi Mitambo
Kudzidzisa Tambo Kune Vechiduku Vatangi
Kunyanya Kuderera Kwemitambo Inoshanda
Nzira Yokutanga Nomunda: Nzira Yokuita Nenzira Inokunda
Kusiyana Kusiyana kwe 'Blade' muGorofu
Yakakwirira Yakapiwa Machechi muChikoro Basketball
Kudonha muBhola Tsanangudzo uye Tsanangudzo
Nei Vanhu Vakwegura Vanoputa? Sayenzi Yomuviri Inofadza Nekukwegura
Hondo yeBhanki Yakapiwa NaMutungamiri Andrew Jackson
Kutungamira kuColonial American House Styles, 1600 kusvika 1800
Kuregererwa Kwemhuka Pamberi - Kodzero dzeZviviri kana Ecoterrorists?
Mazano Okugadzira Nzira Yakanakisisa Yokuraira
Nheyo yeBritish Columbia muCanada
The Complete Story Pamberi peMufananidzo weKuita Skating "Stars on Ice"
Zvirongwa Zvimwe Zvimwe Zvichienderana Nezvokuchengetedza
Nei Vatongi Vangu Vachitsvaga?
Hondo ye1812: General William Henry Harrison
Vietnam Hondo: Gulf of Tonkin Chiitiko
Point of View muGrama uye Kuumbwa
Spotfin Croaker: Mambo wePacific Surf
Dhina Zvinyorwa Zvekutsvakurudza Kwevanhu
Nzira Yokushambidza Sei ABS yako Sensor
'Othello': Cassio naRoderigo
Shaheed Singh Vakatendeka veSikh
Pamusoro '80s Songs of The Cure
Chii Chakaipa Nokudya Nguruve?
Chii Chinonzi Shungite?
Jubile yeGoridhe Victoria yeGorbile